Rikooo ny Aircrafts tsy misy asa eo prepar 3d v4
fanontaniana Rikooo ny Aircrafts tsy misy asa eo prepar 3d v4
2 taona 2 volana lasa izay #643 by brunoeduardo
Misy vaovao mahafaly dikan-prepar 3d v4?
2 taona 1 volana lasa izay #663 by howlak
Ny lohateny lehibe dia tsy marina, toa an'i Rikoo avokoa FSX tsy mandeha ny fiaramanidina:
Rikoo dia tsy mpandrindra ny adihevitra. maro FSX NY fiaramanidina NATIVE amin'ny P3D V4, na tany am-piandohana na nosoratan'i Rikoo. Saingy tsy miasa ny fiaramanidina FS9.
2 taona 1 volana lasa izay #667 by macca22au
Lehilahy, vitsy na tsia FSX na fiaramanidina FS2004 dia hiasa P3Dv4.
Most P3d Ny fiaramanidina v3, fiaramanidina miavaka amin'ny FMC dia tsy miasa P3D4
Ny rafitra 64bit an'ny P3D4, dia midika fa ny fiaramanidina sasany, ny sehatra sns sns dia mila fiovana kely mba ho azo ampiasaina.
Mamporisika ny mpanoratra ny ankamaroan'ny rindrambaiko eto aho mba hiasa amin'ny fanavaozana ny fanampim-bokany.
1 taona 6 volana lasa izay #946 by DRCW
Na i Chris Evens aza tsy nahalala ny zavatra rehetra ary tsy rehefa mamoaka fiaramanidina iray izy milaza ny asa ao amin'ny V4. Ny fahatakarana izany dia tsy maintsy mamela ireo bibikely ireo ianao mba hivoatra amin'ny tsirairay. Ny fiaramanidina sasany dia hiasa ary ny hafa tsy manao izany, dia tsotra izany. Esory izay tsy miasa ary miteraka lozam-pifamoivoizana. Miandrasa kely, vakio ny sehatra, ary tandremo ireo izay manolotra ny fiainany ho maimaim-poana, alaivo ny bug. Ny ankamaroan 'ireo fahadisoana ireo dia ao anatin' ny fanovana ny code izay mivadika P3D avy amin'ny 32 bit amin'ny 64. Amin'ny farany dia ho mendrika izany. Azo antoka fa tezitra ny FSW ... Tahaka ny asan'ny mpilalao sarimihetsika P3D v4. Afaka namoaka ny sariko rehetra aho. Izany dia noho ny antontan-dahatsary fanangonan-tsarimihetsika dia tsy misy afa-tsy ny totozy raha toa ny fiaramanidina dia mifantoka kokoa amin'ny asa sy ny fomban-draharaha.
Fotoana mamorona pejy: 0.246 segondra